काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको उदार मनः सीमान्तकृत बस्तीमा ३०० घर निर्माण गर्ने
२०७४ असोज ८ आइतबार, गुल्मी । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका सीमान्तकृत बोटे माझी र दलित बस्तीमा एक–एक घर उपहार दिने घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
नेपालको समृद्धिको खाका देउवाले राष्ट्रसंघमा खुलेर राखे, विश्वमा निःशस्त्रीकरण लागू गर्न आह्वान
२०७४ असोज ८ आइतबार, न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
एमालेमा नयाँ सोचः भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा जाऔं
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल चीनमा, यस्तो छ कार्यक्रम
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल चीनको बेइजिङमा यही असोज १० देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को ८६औं महासभामा सहभागी हुन शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रदेश २ : पुरानो लयमा फर्किन सकेन काँग्रेस, एमालेको हालत खराब
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशमा काँग्रेसले पहिलेको साख जोगाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेस पहिलो स्थानमा देखिएपनि पकड क्षेत्रहरु फुत्किएको टिप्पणी भएको हो । ... बाँकी अंश»
गोविन्द केसीले भने–माफियालाई संरक्षण गर्ने सांसदको कुण्डली सार्वजनिक गर्छु (विज्ञप्तिसहित)
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले माफियालाई संरक्षण गर्ने सांसदहरुको कुण्डली नै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो हुन्छ रे प्रचण्डको दशैं
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दशैँ पोहोर, परारकै वर्ष झँै वित्ने बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२ नम्बर प्रदेशको सन्देश : ‘अबका निर्वाचनमा बहुमत कसैको नपुग्ने’
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं । दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । जानकारहरुले पनि यो निर्वाचनले संविधानको स्वीकारोक्ति लिएको र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रचण्डको 'मायाजाल'का कारण माओवादीले पुर्‍यायो स्थानीय तहमा शतक
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं। समय र तत्कालीन वातावरण बुझेर सान्दर्भिक भाषण दिन माहिर प्रचण्डकै अभिव्यक्ति र चातुर्यताले स्थानीय तहमा माओवादीले शतक कटाएको छ। माओवादीले शतक कटाएसँगै माओवादीले आफू आफैंमा ठूला दलहरुको रुपमा नेपाली राजनीतिमा दर्ज गराएको छ। यस भन्दा अघि पहिलो भएको दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले पनि शतक कटाईसकेका छन्। ... बाँकी अंश»
कर्णाली करीडोर निरिक्षण गर्न बाजुरा पुगे रक्षामन्त्री
२०७४ असोज ७ शनिबार, बाजुरा । बाजुराको उत्तरी भेगमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली करिडोर सडकको अनुगमन गर्न रक्षा मन्त्री भीमसेनदास प्रधान बाजुराको कोल्टी आइपुग्नु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष ओलीको चुनावी योजना प्रस्तुत
२०७४ असोज ७ शनिबार, काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को आजदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय राजनीति र आगामी चुनावी योजनासम्बन्धी समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्न समूह गठन गरिएको छ। ... बाँकी अंश»
धनुषामा काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दापनि एमालेलाई जित्न सकेनन्
२०७४ असोज ६ शुक्रबार, काठमाडौं । सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा गठबन्धन पराजीत भएको छ । ... बाँकी अंश»
संविधान कार्यन्वयनको बाटोमा : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
२०७४ असोज ६ शुक्रबार, स्याङ्जा । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नेपाली जनताले लेखेको संविधान अन्ततः कार्यन्वयनको पक्षमा पुगेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
निर्वाचनमा उद्योगी तथा पैसावालाले टिकट पाए : पूर्व राष्ट्रपति यादव
२०७४ असोज ६ शुक्रबार, काठमाडौँ । पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गराउँदै जीवन्त बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
एमाले र राजपाको ‘दुई अतिवाद’ नस्वीकारेको जनमत
२०७४ असोज ६ शुक्रबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन आउनेबेलासम्म मुलुकमा एउटा यस्तो माहोल चुलिएको थियो कि यो देशमा नेकपा एमालेमात्रै एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो । ... बाँकी अंश»
परिणामको रोचक पक्ष : जनता दलको चमत्कारदेखि एमालेको लज्जास्पद पराजयसम्म !
२०७४ असोज ५ बिहिबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत् सोमबार भएको मतदानको अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहको निर्वाचन आईसकेको छ । त्यस्तै, एक सय स्थानीय तहकोमत गणना जारी रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म काँग्रेसले ११ स्थानमा विजय हाँसिल गरेको छ । ... बाँकी अंश»
मन्त्रीकी पत्नी–जो प्रदेश २ को पहिलो महिला मेयर भईन्
२०७४ असोज ५ बिहिबार, रौतहट । प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्रले अर्को सफलता हासिल गरेको छ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट महिला उम्मेदवारले जित हासिल गरेकी छन् । त्यो पनि मन्त्री पत्नी । ... बाँकी अंश»
चुनावमा भोट नदिएको विषयमा झडप हुँदा रौतहटमा एकको ज्यान गयो
२०७४ असोज ५ बिहिबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा रौतहटको कटहरीया नगरपालिकामा भोटको विषयमा भएको विवादमा झडप हुदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
२ नम्बर प्रदेशमा माओवादीले खाता खोल्यो, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रबाटै विजयी सुरुवात
२०७४ असोज ४ बुधबार, सिरहा । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । मेउर र उपमेयर दुवैमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भए । ... बाँकी अंश»
‘जीत निश्चित’ भनिएको धनुषाको हंशपुरमा किन हार्‍यो काँग्रेस ?
२०७४ असोज ४ बुधबार, काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा नेपाल विजयी भएको छ । जुन नगरपालिका नेपाली काँग्रेसले आफ्नो जीत निश्चित भईसकेको भनिएको नगरपालिका हो । ... बाँकी अंश»